စမတ်ဖုန်းများရဲ့ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း နည်းပညာ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ အပိုင်း (၁) – DigitalTimes.com.mm
291 Shares 128 Views
Android Device များမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်း နည်းပညာများထည့်သွင်းပေးထားတာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာနေပါပြီ။ အခုတော့ Apple ကလည်း iPhone X, iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus များမှာ ဒီနည်းပညာကို ပထမဆုံး ထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်း နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း နည်းပညာ ဆိုတာ ဘာလဲ ?
သူ့ရဲ့ အမည်အတိုင်းပဲ ရှင်းလင်းပါတယ်။ ကြိုးများဖြင့် ဆက်သွယ်စရာ မလိုဘဲ စွမ်းအင် ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ ကိရိယာကနေ အီလက်ထရောနစ် ကိရိယာထံသို့ စွမ်းအင်ကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစနစ်မှာ Transmitting Pad နဲ့ Receiver လိုအပ်ပါတယ်။ Receiver ကို ဖုန်းများထဲမှာ သာမက Phone Case များထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းထားကြပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို ဖန်တီးဖို့အတွက် လျှပ်စစ် စီးကြောင်းကို နန်းကြိုးခွေနှစ်ခုအား ဖြတ်သန်း စီးဆင်းစေခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို ဖန်တီးရပါတယ်။ ဖုန်းမှ သံလိုက်ပြားက နီးကပ်တဲ့ အကွာအဝေးအတွင်းမှာ Transmitter နဲ့ ထိတွေ့တဲ့ အခါမှာ လျှပ်စစ် စက်ကွင်းများက ဖုန်းထဲမှာ လျှပ်စစ် စီးကြောင်းကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဲဒီ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ဘက်ထရီအား အားသွင်းပေးဖို့အတွက် Direct Current (DC) အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ရဲ့ စံနှုန်းများ
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ရဲ့ စံနှုန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Qi ကို အသုံးများကြပါတယ်။ ( ချီ လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ) သူ့ကို Wireless Power Consortium(WPC) က ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး ၄၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးအတွင်းမှာ အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Qi မှာ Power Specification သုံးခု ရှိပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးပါဝါဟာ 5W အထိ ပို့ဆောင်ပေးပြီး အဓိကအားဖြင့် စမတ်နာရီများနဲ့ မိုဘိုင်း ကိရိယာများအတွက် သုံးပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ 15W အထိ ထောက်ပံ့မယ်လို့ WPC က ပြောပါတယ်။
120W အထိ ထောက်ပံ့တဲ့ အလယ်အလတ် ပါဝါ Spec ကို မော်နီတာနဲ့ လက်တော့များအတွက် သုံးပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ ပါဝါ Spec ဟာ 1kW အထိ ထောက်ပံ့ပြီး မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများမှာ သုံးပါတယ်။
Qi စံနှုန်းကို ဖုန်း ကုမ္ပဏီကြီးများ ဖြစ်တဲ့ Samsung, Sony, LG, HTC, Huawei, Nokia, Motorola နဲ့ Blackberry တို့က သုံးကြပါတယ်။
ကြိုးမဲ့အားသွင်း စနစ်ပါတဲ့ ဖုန်းများ
ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ပါတဲ့ ဖုန်း အများစုဟာ Qi ကို သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung Galaxy S6 , S6 Edge , BlackBerry Priv တို့ဟာ Qi နဲ့ PMA နှစ်မျိုးစလုံးကို သုံးကြပါတယ်။ Qi ပါတဲ့ ဖုန်းများမှာ
•	Asus Padfone S
•	BlackBerry Z30
•	Google Nexus 7
•	Samsung Galaxy S7 Active
•	Sony Xperia Z3V
•	Sony Xperia Z4V
•	Motorola Droid Maxx
•	Motorola Droid Mini
•	Motorola Droid Turbo
•	Motorola Droid Turbo 2
•	Motorola Moto X Force
•	Nokia Lumia 920
•	Nokia Lumia 928
•	Nokia Lumia 929 / Icon
သင့် ဖုန်းအတွက် Wireless Charging Adapter လိုအပ်သလား ?
နောက်ပိုင်းထုတ် ဖုန်းများမှာ ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ပါပေမယ့် Adapter or Case လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းတွေကတော့
•	Samsung Galaxy S5 – an internal adapter that is fitted inside the phone, behind the battery cover.
Apple က ကြိုးမဲ့ အားသွင်း စနစ်ကို ထောက်ပံ့သလား ?
Apple က iPhone X, iPhone 8 , iPhone 8 Plus များမှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်း စနစ်ကို တစ်ပါထဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ပိုင် ကြိုးမဲ့ အားသွင်း ကိရိယာ ဖြစ်တဲ့ Apple AirPower ကိုလည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ် အိုင်ဖုန်းများနဲ့သာမက Watch, AirPods များနဲ့ပါ တွဲဖက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ အိုင်ဖုန်း မော်ဒယ်အဟောင်းများမှာလည်း Qi Charging Adapter ကို သုံးရင် ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစနစ်ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
စမတျဖုနျးမြားရဲ့ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး နညျးပညာ အကွောငျး သိကောငျးစရာမြား အပိုငျး (၁)
Android Device မြားမှာ ကွိုးမဲ့အားသှငျး နညျးပညာမြားထညျ့သှငျးပေးထားတာ နှဈအနညျးငယျကွာနပေါပွီ။ အခုတော့ Apple ကလညျး iPhone X, iPhone 8 နဲ့ iPhone 8 Plus မြားမှာ ဒီနညျးပညာကို ပထမဆုံး ထညျ့သှငျးပေးလာပါတယျ။ ကွိုးမဲ့အားသှငျး နညျးပညာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး နညျးပညာ ဆိုတာ ဘာလဲ ?
သူ့ရဲ့ အမညျအတိုငျးပဲ ရှငျးလငျးပါတယျ။ ကွိုးမြားဖွငျ့ ဆကျသှယျစရာ မလိုဘဲ စှမျးအငျ ထုတျလှငျ့ပေးတဲ့ ကိရိယာကနေ အီလကျထရောနဈ ကိရိယာထံသို့ စှမျးအငျကို ပို့ဆောငျပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ကွိုးမဲ့ အားသှငျးစနဈမှာ Transmitting Pad နဲ့ Receiver လိုအပျပါတယျ။ Receiver ကို ဖုနျးမြားထဲမှာ သာမက Phone Case မြားထဲမှာလညျး ထညျ့သှငျးထားကွပါတယျ။
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈရဲ့ အလုပျလုပျပုံ
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈမှာ လြှပျစဈသံလိုကျလှိုငျးကို ဖနျတီးဖို့အတှကျ လြှပျစဈ စီးကွောငျးကို နနျးကွိုးခှနှေဈခုအား ဖွတျသနျး စီးဆငျးစခွေငျးဖွငျ့ စှမျးအငျကို ဖနျတီးရပါတယျ။ ဖုနျးမှ သံလိုကျပွားက နီးကပျတဲ့ အကှာအဝေးအတှငျးမှာ Transmitter နဲ့ ထိတှတေဲ့ အခါမှာ လြှပျစဈ စကျကှငျးမြားက ဖုနျးထဲမှာ လြှပျစဈ စီးကွောငျးကို ဖနျတီးပေးပါတယျ။ အဲဒီ လြှပျစဈစီးကွောငျးကို ဘကျထရီအား အားသှငျးပေးဖို့အတှကျ Direct Current (DC) အဖွဈ ပွောငျးလဲပေးပါတယျ။
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈရဲ့ စံနှုနျးမြား
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈရဲ့ စံနှုနျးအနညျးငယျရှိပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ Qi ကို အသုံးမြားကွပါတယျ။ ( ခြီ လို့ အသံထှကျပါတယျ။ ) သူ့ကို Wireless Power Consortium(WPC) က ဖနျတီးထားတာ ဖွဈပွီး ၄၀ မီလီမီတာ အကှာအဝေးအတှငျးမှာ အားသှငျးပေးနိုငျပါတယျ။
Qi မှာ Power Specification သုံးခု ရှိပါတယျ။ အနိမျ့ဆုံးပါဝါဟာ 5W အထိ ပို့ဆောငျပေးပွီး အဓိကအားဖွငျ့ စမတျနာရီမြားနဲ့ မိုဘိုငျး ကိရိယာမြားအတှကျ သုံးပါတယျ။ အနာဂတျမှာ 15W အထိ ထောကျပံ့မယျလို့ WPC က ပွောပါတယျ။
120W အထိ ထောကျပံ့တဲ့ အလယျအလတျ ပါဝါ Spec ကို မျောနီတာနဲ့ လကျတော့မြားအတှကျ သုံးပါတယျ။ မွငျ့မားတဲ့ ပါဝါ Spec ဟာ 1kW အထိ ထောကျပံ့ပွီး မီးဖိုခြောငျသုံး ပစ်စညျးမြားမှာ သုံးပါတယျ။
Qi စံနှုနျးကို ဖုနျး ကုမ်ပဏီကွီးမြား ဖွဈတဲ့ Samsung, Sony, LG, HTC, Huawei, Nokia, Motorola နဲ့ Blackberry တို့က သုံးကွပါတယျ။
ကွိုးမဲ့အားသှငျး စနဈပါတဲ့ ဖုနျးမြား
ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈပါတဲ့ ဖုနျး အမြားစုဟာ Qi ကို သုံးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Samsung Galaxy S6 , S6 Edge , BlackBerry Priv တို့ဟာ Qi နဲ့ PMA နှဈမြိုးစလုံးကို သုံးကွပါတယျ။ Qi ပါတဲ့ ဖုနျးမြားမှာ
သငျ့ ဖုနျးအတှကျ Wireless Charging Adapter လိုအပျသလား ?
နောကျပိုငျးထုတျ ဖုနျးမြားမှာ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈပါပမေယျ့ Adapter or Case လိုအပျပါတယျ။ အဲဒီဖုနျးတှကေတော့
Apple က ကွိုးမဲ့ အားသှငျး စနဈကို ထောကျပံ့သလား ?
Apple က iPhone X, iPhone 8 , iPhone 8 Plus မြားမှာ ကွိုးမဲ့အားသှငျး စနဈကို တဈပါထဲ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ သူ့ကိုယျပိုငျ ကွိုးမဲ့ အားသှငျး ကိရိယာ ဖွဈတဲ့ Apple AirPower ကိုလညျး ဒီနှဈထဲမှာ ရောငျးခမြှာ ဖွဈပွီး နောကျဆုံးထုတျ အိုငျဖုနျးမြားနဲ့သာမက Watch, AirPods မြားနဲ့ပါ တှဲဖကျ သုံးနိုငျပါတယျ။ အိုငျဖုနျး မျောဒယျအဟောငျးမြားမှာလညျး Qi Charging Adapter ကို သုံးရငျ ကွိုးမဲ့ အားသှငျးစနဈကို သုံးနိုငျပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့